ဦးနေဝင်း | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
1 Reply	ကွှန်ုပ်တို့ ငယ်စဉ်က မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လူကြီးတွေ ပြောပြတဲ့ ရိုးရာ ပုံပြင်တွေနဲ့ သိမှတ် ခဲ့ရတယ်…နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရှေ့ မှီ နောက်မှီ နိုင်ငံရေး သမားကြီးတွေ ဆီက နှုတ်ဆင့် စကားနဲ့ သိမှတ်ကြရတယ်။ ကွှန်ုပ်တို့ ကလေးဘ၀က သွားရှာလေသူ အာဏာရှင် နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာ သူခိုးကြီး ဦးနေ၀င်း ၊ ပြည်ပမှာ ဘယ်လို မြင်းပွဲ လောင်းကစား လုပ်ခဲ့တာတွေ၊ မယားတွေ မှိုလိုပေါက် ယူခဲ့တာတွေ ကြားရတယ်။
ဦနေ၀င်းမှာ မယား (၅)ယောက်ရှိကြောင်း သားသမီး(၉) ယောက် ရှိကြောင်း ကွှန်ုပ်တို့နဲ့ အလွန်ခင်တဲ့ နိုင်ငံရေး သမားကြီးက အင်းစိန် ထောင်ထဲမှာ အတူနေစဉ် ပြောပြဖူးတယ်။
သားသမီး နဲံ ပတ်သက်လာရင် He Three(3)_ She three(3)= We three (3) လို့ မှတ်ထားတဲ့။
အဘရာ ကျနော်တို့ နားလည်အောင် ရှင်းပြပါဆိုတော့ —
ဦနေ၀င်းဘက်က လင်ပါ (၃)ယောက်၊
ဒေါ်ခင်မေသန်း ဘက်က မယားပါ (၃) ယောက်၊
ဦနေ၀င်းနဲ့ ဒေါ်ခင်မေသန်း ပေါင်းတော့ သားသမီး (၃)ယောက် မွေးတယ်။
ပေါင်း (၉)ယောက်ပေါ့ လို့ ပြောတယ်။
အင်တာနက်ကနေ ၀ီလိပီဒီယား မှာ ရှာကြည့်တော့ ဦးနေ၀င်း ကိုယ်ရေး ရာဇ၀င်မှာ 14 May 1910 မှာမွေးတယ်။
–5December 2002 မှာသေတယ်။
ပထမ ဇနီး ဒေါ်သန်းညွန့် နဲ့ မွေးတာ ကျော်သန်း ဆိုတဲ့ သားတယောက်ရှိတယ်။
နောက် ဒေါ်တင်တင်နဲ့မွေးတာ ငွေစိုး ဆိုတဲ့ သားတစ်ယောက်ရှိတယ်။
ဦးနေ၀င်းဘက်က ပါးတဲ့ လင်ပါ (၂)ယောက်ပဲ ဖော်ပြတယ်။
လဲ့လဲ့ဝင်း၊ အမွှာ ညီအမ ဖြစ်တဲ့ သီတာဝင်း၊ နဲ့ သန္တာဝင်း တို့ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ အဖေက အမေရိကန်ရောက် မြန်မာ ဆရာဝန်ကြီး တဦးလို့ ဆိုကြတယ်။
ဦးနေ၀င်းနဲ့ဒေါ်ခင်မေသန်း တို့ နှစ်ပါးစုံ- မွေးတာက စန္ဒာဝင်း၊ ကြေးမုံဝင်း၊ ဖြိုးေ၀၀င်း တို့ (၃)ယောက် ဖြစ်တယ်။ သားမီး (၈)ယောက်ပဲ ဒီကလိ ပီဒီယားက ဖော်ပြထားတယ်။
ဦးနေ၀င်းဟာ (၆)ကြိမ် လက်ထပ်တယ်လို့ ဖော်ပြပေမယ့် မယားစာရင်းမှာ တရားဝင် (၅)ယောက် ၀ီကလိ ပီဒီယားက ဖော်ပြတယ်။
၁။ ဒေါ် သန်းညွန့် 
၄။ ဒေါ်နီနီမြင့် (တက္ကသိုလ် ဆရာမ) ကွာရှင်း ။ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လက်ထပ်
၅။ ရတနာ နတ်မယ် (ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့ မြေးတော်) တို့ ဖြစ်တယ်။ သူမဟာ ဦးနေ၀င်းနဲ့ လက်ထပ်ချိန်မှာ သြစတေလျှ နိုင်ငံသား အင်္ဂလိပ် လူမျိုး တဦးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး သား(၂)ယောက်ရှိတဲ့ တစ်ခုလပ်မ တဦးဖြစ်တယ်
နောက် ပြီးအင်္ဂလန်မှာ တိုးတိုးတိတ်တိတ် အိမ်ကြီး တလုံး ၀ယ်ထားတာကို နောက်ဆုံး အမည်ခံ ၀ယ်ပေးတဲ့ အင်္ဂလိပ် က တရားစွဲလို့ အမှု ရှုံးကာ လက်လွှတ်ခဲ့ရပုံတွေ တစ်ထောင့် တည ပုံပြင်လို ကြားခဲ့ရတယ်။
ဒါကို အင်အယ်လ်ဒီက ဦးတင်ဦး(ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း) ကတော့ ။
အဲဒီကိစ္စမှန်ကြောင်း ဗွီအိုအေ အသံပိုင်း တပ်မှူး တပ်သား ပြောစကား ကဏ္ဍမှာ ထုတ်ဖော်ပြောတာ နားထောင်ရတယ်။ အသေးစိတ် သူရှင်းပြတာက ဦးနေ၀င်းက တော်လှန်ရေးေ ကာင်စီ အစိုးရဆိုပြီး တက်လာတော့ နိုင်ငံခြားသားပိုင် စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းတွေကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ဘီအိုစီ -ရေနံ ကုမ္မဏီ ကိုသိမ်းတော့ မြန်မာ အစိုးရက ၄၅ ရာခိုင်နှုံးပိုင်တယ်၊ ဘီအိုစီက ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်တယ် ဆိုပြီးတော့ လျှော်ကြေးငွေ ၅၅ ရာနှုန်းကို ပြန်ပေးတယ်။ ဘီအိုစီကနေ ပြန်ရတဲ့ ၅၅ ရာနှုန်းထဲက လက်ဆောင်အဖြစ် ငွေဘယ်လောက်မှန်း မသိဘူး။ ပွဲစားခ သဘောပြန်ရတယ်။
အဲဒီရတဲ့ ငွေနဲ့ အင်္ဂလန်မှာ ခြံအကျယ်ကြီးနဲ့ အိမ်တလုံး အင်္ဂလန်မှာ သွားရင် နေဖို့ ဦးနေ၀င်နဲ့အလွန်ခင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ဘီအိုစီ စာရေးကြီးနာမည်နဲ့ ဝယ်တယ်။ အနောက် နိုင်ငံမှာက နိုင်ငံခြားခြားသားတွေ မြေ၀ယ်ခွင့် မရှိတော့ ဘီအိုစီ စာရေးကြီး နာမည်နဲ့ဝယ်တယ်။ အဲဒီစာရေးကြီး သေတော့ စာရေးကြီးသားက တရားရုံးမှာ သူ့ အဖေနာမည်နဲ့ ဝယ်တဲ့ အိမ်မိုလို့ သားဖြစ်တဲ့ သူ ရထိုက်ကြောင်း တရားရုံးကို ဦးတိုက်လျှောက်တော့ ဦးနေ၀င်း အမှု ရှုံးပြီး ခြံနဲ့ အိမ်ကြီးကို ဘီအိုစီ စာရေးကြီး သားကို ပေးလိုက်ရတယ်။ အမှန်ပါ။ ကောလာဟလ မဟုတ်ပါဘူး။ လို့ ရှင်းပြတယ်။
ဒါက တရားဝင် အနီးကပ်နေခဲ့ဖူးတဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီ ဦးတင်ဦးက ထုတ်ပြောလို့ သိရတာ။
တခြား ထိန်ဝှက်ထားတာတွေ ဘယ်လောက်များမှန်း မသိဘူး…
ဦးနေ၀င်းဟာ..ဖဆပလ အစိုးရထံမှ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂) ၇က်နေ့ မှာ အာဏာသိမ်းခဲ့သည်။
၁၉၆၂-တွင် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြကြရာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ရာကျော်မျှ ပစ်ခတ်ခံရကာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦး လည်းပျက်စီးခဲ့ရသည်။
ထိုနေ့ညနေ ၈ နာရီ တွင် ဦးနေ၀င်းသည် “ဆူပူလှုပ်ရှားမှုများ ရပ်တန့် ခြင်းမရှိပါက ဓါးကိုဓါးဖြင့် သော်၎င်း၊ ၊ လှံကိုလှံဖြင့် သော်၎င်း တုန်ပြန်မည်”ဟု ၅-မိနစ်ကြာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၂၆နှစ်ကြာ ၊ ၁၉၈၈ တွင် ဦးနေ၀င်းမကျောင်းသားသမ္မက အဆောက်အဦးကို မိုင်းခွဲရန် စေခိုင်းသူမှာ သူမဟုတ်ရပါကြောင်း ၊ ဗိုလ်အောင်ကြီးသာ တရားခံဖြစ် ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်စန္ဒာဝင်းနှင့် လူ (၂၅) ယောက်ခန့်သာ လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ခွင့်သာရခဲ့သည်..
အဆိုးဆုံးမှာ.. ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဖြစ်ပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသော ဦးနေ၀င်း သည် သူ၏ဈာပနကို တပ်မတော်စစ်သချိုင်း (မင်္ဂလာဒုံ) ၌ စစ်အခမ်းအနားဖြင့် ကျင်းပခွင့်လည်းမရ.. အထိမ်းအမှတ် အုတ်ဂူ ပြုလုပ်ခွင့်မရဘဲ မီးသဂြိုလ်ပြီး အရိုးပြာများ ကို ရန်ကုန်မြစ်အတွင်းသို့ မျောချခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်..
This entry was posted in Artical and tagged စစ်အာဏာရှင်, ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း, ဦးနေဝင်း, နေဝင်း, General Nay Win Burma, Ko Shwe Htoo's blog, Myanmar Articles, Myanmar News, Nay Win, Ne Win, Ne Win Burma on April 27, 2013 by koshwehtoo.	Post navigation
Spoke Person from NLD →
One thought on “ဦးနေဝင်း”	myat htet October 4, 2013 at 7:41 am	ဒီသမိုင်းကို ပြည်သူတွေ မမေ့သင့်ဘူး
ဒီလုပ်ရပ်က မေတ္တာ စေတနာ မုဒိတာ နည်းလို့
ဒီအဖြစ်တွေက ပညာဥာဏ် မရှိလို့
ဒီလူတွေက ပေါက်ပွားတဲ့ ကျန်ရစ်လူတွေ
ဒီနိုင်ငံက ပြည်သူကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ
ကြိုးစားကြပါလို့ရယ် အမျိုးသား မြန်မာတို့ရယ်